२०७४ सालमा कुन राशिले कुन राशिसँग कारोबार गर्दा राम्रो ? कुनसँग नराम्रो ?
» २०७४ सालमा कुन राशिले कुन राशिसँग कारोबार गर्दा राम्रो ? कुनसँग नराम्रो ?
मेष राशि भएकाहरुले कर्कट र सिंह राशि भएकाहरुलाई ऋण सापटी नदिंदा यो बर्ष राम्रो होला । वृष राशिसँग कारोबार गर्दा फाइदाजनक होला । मिथुन राशिसँग सजग रहनुहोला । कुम्भ राशिसंग पैसाको कारोबार गर्दा ख्याल गर्नुहोला ।
मीन, मिथुन र मकर राशिसँग कारोबार कम गर्दा राम्रो होला । अरु राशि भएकाहरुसंगको कारोबार राम्रै होला । कुम्भ राशिलाइ ऋण सापटी नदिएको राम्रो । कन्या राशिसंग मिलेर काम गर्दा फाइदा होला । तुला राशिसंग कारोबार गर्दा ख्याल पुर्याउनुहोला ।
सिंह राशिसंग काम गर्दा बढी नै फाइदा होला । मेष, र कर्कट राशिसँग काम गर्दा सजग हुनुहोला । सुनचाँदीको कारोबार गर्दा मीन राशीसंग सकेसम्म नगर्नुहोला ।
कन्या राशिसंग मिलेर काम गर्दा फाइदा होला । कुम्भ राशीसँग खासै फाइदा हुने योग छैन । मीन राशिसंग काम गर्दा उसले बढी फाइदा कमाउला । वृष राशिसंग काम गर्दा फाइदा होला । कर्कर्ट नै राशि भएकाहरुलाई ऋण सापट नदिएको राम्रो होला ।
मिथुन राशिसंग मिलेर काम गर्दा फाइदा होला । सिंह राशि नै भएकाहरुसंगको कारोबार पनि औसत रहनेछा । सकेसम्म धनु राशिसंग कारोबार नगर्दा नै बेश होला ।
तपाईंलाइ मकर राशिसंग काम गर्दा फाइदा होला । वित्तीय कारोबार गर्नलाई तुला राशि सहज होला । मेष राशिदेखि जोगिनुहोला ।
तुला राशि भएकाहरुका लागि लगभग कुनै राशि पनि नाफाफ्ने खालको छैन । बढी फाइदाचाहिं तुला राशिसंग होला । धनु राशिको पछाडी नलाग्दा राम्रो होला भने मीन राशिसँग ठुलो रकमको कारोबार नगर्दा राम्रो होला ।
मेष, र मकर राशिसंग काम गर्दा फाइदा होला । मीन राशिलाइ ऋण दिंदा होस् पुर्याउनुहोला । मिथुन राशिसंग कारोबार गर्दा फाइदा नै होला ।
कर्कट र धनु नै राशि भएकाहरुसँग कारोबार गर्दा फाइदा नै होला । सुनचाँदीको कारोबार गर्दा वा ऋण सापटी गर्दा मेष राशिसंग सजग बन्नुहोला । मीन राशिसंग औसत कारोबार हुनेछ ।
मेष राशि संग जोगिनुहोला । कुम्भ र कर्कटसंग काम गर्दा फाइदा होला । मेष राशि भएकासंग वित्तीय कारोबार गर्दा फाइदा नै होला ।
मेष, मिथुन, मीन र धनु राशि भएकाहरुसंग कारोबार नगर्दा नै राम्रो होला । अन्य राशिसंगको कारोबार राम्रै होला । कन्या राशिसंग कारोबार गर्दा सजग हुनुहोला ।
मीन राशि भएकाहरुले मीन नै राशि भएकाहरुसंग कारोबार गर्दा निकै फाइदा होला । अशुभ राशि खासै कुनै छैन । सिंह राशिसंग कारोबार गर्दा ख्याल गर्नुहोला ।
प्रस्तुती : पण्डित श्रीधर पौडेल